Talooyinka waaxda caafimaadka dadweynaha ee lagu joojinayo COVID-19 (Somali) - King County
ASL for D/HOH & DB አማርኛ — Amharic العربية – Arabic မြန်မာဘာသာ – Burmese 中文 – Chinese دری – Dari فارسی – Farsi Na vosa vaka-Viti – Fijian Français – French हिन्दी – Hindi Hmoob – Hmong 日本語 – Japanese ភាសាខ្មែរ – Khmer 한국어 – Korean ພາສາລາວ – Lao Kajin M̧ajeļ – Marshallese नेपाली – Nepali Afaan Oromoo – Oromo پښتو – Pashto Polski – Polish Português – Portuguese ਪੰਜਾਬੀ – Punjabi Română – Romanian Русский – Russian Gagana fa‘a Sāmoa – Samoan Af Soomaali – Somali
Talaalka COVID-19 Go’doon iyo karantiil Maaskarada wajiga
Español – Spanish Kiswahili – Swahili Wikang Tagalog/Filipino – Tagalog/Filipino ภาษาไทย – Thai ትግርኛ – Tigrinya Lea faka-Tonga – Tongan Українська – Ukrainian Tiếng Việt – Vietnamese
Talooyinka waaxda caafimaadka dadweynaha ee lagu joojinayo COVID-19
Public Health Recommendations to Stop COVID-19 in Somali
Warbixinta May 5, 2022: Xiritaannada goobaha baaridda
Waaxda Caafimaadka Dadweynaha ee Deegaanka King (Public Health – Seattle & King County) waxay joojineysaa shaqooyinkeeda goobaha baaridda COVID-19 ee Tukwila iyo Federal Way. Waa mahadsantihiin kulligiin shaqaalaha, mutadawiciinta iyo iskaashatooyinka kuwaasoo gacan ka geystay goobahaan inay furmaan oo dhaqso u shaqo-galaan si bulshooyinkeena ugu nugul lagu ilaaliyo.
Maalinta ugu dambeysa ee shaqada King County ee Tukwila iyo Federal Way waxay noqon doontaa May 27.
Ayadoo maal-gelinta federaalka iyo baahida baaridda hoos u dhacayaan, Waaxda Caafimaadka Dadweynaha waxay ka guureysaa gurmadka degdeggaa oo u wareegeysaa maareeynta ka-hortagga COVID-19 ee muddada dheer. Sugidda baaridda COVID-19 oo bilaashka ah oo si sahlan lagu heli karo waxay sii tahay ahmiyad sare, khaasatan in laga dhex-helo bulshooyinka khatarta ugu sarreysa ku jira.
Baaritaano iskaa ah oo degdeg ah oo bilaash ah waxay diyaar ku yihiin ilahaan:
Department of Health – www.sayyescovidhometest.org (bog-khad Ingiriis ku qoran) ama 1-800-525-0127
Qoysasku waxay dalban karaan baaritaano dheeraad ah bil kasta.
Dowladda federaalkaa – www.covidtests.gov (bog-khad Ingiriis ku qoran) ama 1-800-232-0233
Guriga kasta ee Mareykanka wuxuu codsan karaa labo dalab, tootal ahaan 4 baaritaan guri oo bilaash ah.
Meelo badan oo baarid waxay sii wadaan bixinta baarid bilaash ah gudaha Deegaanka King. U booqo kingcounty.gov/covidtesting liiskii ugu dambeeyay (bog-khad Ingiriis ku qoran).
Qaad tillaabooyinkan si aad gacan uga geysato maaraynta faafitaanka caabuqa “coronavirus” si midba midka kale uu ilaaliyo.
Ilaalinta ugu wanaagsan waa in aad qaadatid Tallaalka. Dadka si buuxda u tallaalan ayaa hadda waxyaabo badan si badbaado leh u qaban kara (bogga waa ingiriis kaliya) waxayna ka caawin karaan yaraynta COVID-19 ee bulshada dhexdeeda.
Ku xidhashada maaskaro meelaha khatarta sare leh (sida meelaha dadku ku badan yihiin) waxay caawisaa in la ilaaliyo qof walba. Waxaa si gaar ah muhiim u ah in la ilaaliyo dadka aan ilaalinta buuxda ka heli karin tallaalka, sida carruurta yaryar iyo dadka qaba xaalado caafimaad oo aan awood u lahayn inay la dagaallamaan fayraska.
Is baar haddii aad leedahay astaamo COVID-19 ama aad la xiriirtay qof laga helay fayraska.
Haddii aad iska tijaabiso COVID-19 ama aad halis sare ugu jirto cudurka, inaad goor hore daawaynta COVID-19 u hesho (macluumaad Ingiriisi kaliya) waxay kaa caawin kartaa inaad ka ilaaliso jirro daran iyo isbitaal dhigid. Weydii bixiyaha xanaanada caafimaadkaaga inuu arko haddii daawaynta lagugula taliyo.
Xadid ama yaree hawlaha kuna qabo meel dibadda ah haddii ay ka qayb-qaadanayaan dad aan la tallaalin. Fayrasku si fudud ayuu ugu fidaa meelaha gudaha, sidaas oo tahay ganacsiyada iyo ururaduba waxa ay yarayn karaan fayraska hawada ku jira iyaga oo oggolaanayo in hawo wanaagsan ay soo gasho gudaha iyo ayaga oo isticmaalaya qalabka sifaynta hawada (Bogga waa Engiriis kaliya).
Maamulka astaamahaaga COVID-19 ee gurigaaga
Baar si lagu Daaweeyo waa barnaamij cusub oo caawin kara dadka in ay is baaraan oo si dhaqso leh ugu helaan daaweyn bilaash hadday qabaan COVID-19.
Baaritaanka COVID-19 oo bilaash ah
Codso luqadda aad rabto adoo Ingiriis ku hadlaya. Tusaale ahaan: dheh “Isbaanish"(ha dhihin isbanyool).
Kuma weydiinayno xaaladaada socdaal. Qof kastaa wuu heli doonaa caawimaad, iyadoon loo eegin xaaladdiisa.
Caafimaadka deegaanka amarka sarkaalka oo karantiil iyo go'doon wax ku ool ah maarso 28, 2020.
Astaamaha COVID-19 dhifka ah ee caruurta
Yaree khatarka COVID-19 intaad mudaharadka ku jirto
Waxa La Sameeyo Marka Aad Leedahay COVID-19 Xaruntaada Oo La Shaki Ka Yahay ama La Xaqiijiyay
Liiska Warbixinta ee Maamulayaasha Daryeelka Ilmaha: Tallaabooyinka looga Hortagayo COVID-19
Liiska Warbixinta ee Maamulayaasha Daryeelka Ilmaha: Talaabooyinka La Qaado Marka Aad Leedahay COVID-19 laga shakisan yahay ama la xaqiijiyay Kiiska Xaruntaada
COVID-19 Xaashida Xaqiiqada ah ee Qoysaska
Warqadda ogeysiiska gaarista ee COVID-19
Nooval Koronavirus (COVID-19), Washington State Dept. of Health
Waxa aad u baahan tahay inaad ogaatgobaaritaanka cudurka COVID-19
Shaqaalaha: Sidee Inta Badan Loo Abuura Badbaadada Shaqada Deegaanka Ee COVID
Ma u baahan tahay Taageer si loo Takooro ama karantiil?
Calaamadaha daabacaadda iyo soo bandhigida si ay uga caawiyaan hay'adaha in ay la xiriiraan macaamiishooda iyo shaqaalahooda ee tallaabooyinka ay qaadayaan si loo yareeyo halista COVID‑19:
Tilmaamaha xidhashada waji-xidhka
Mask up: Aan is wada ilaalino
Af-xirasho halkaan waa looga baahanyahay
Maaskarada qasab ma aha
Link/share our site at www.kingcounty.gov/covid/somali